Soo degso garoonka diyaaradaha Fort Wayne Intl Airport FSX / Steam - Rikoooo
Madaarka Fort Wayne Intl Airport FSX / Steam
downloads 4 505
Waayo, Prepar3D nooca la jaan qaada riix halkan
Tani waa dawgalay faahfaahsan Airport Fort Wayne International, Indiana, USA. Garoonka waa garoonka diyaaradaha ee gobolka Waqooyi-bari u adeegaya Indiana iyo sidoo kale waa guriga ka mid ah Ciidanka Cirka ee 122nd Fighter Wing Indiana ANG.
Garoonka ayaa waxaa markii hore la odhan jiray "Baer Field" sida saldhig ciidan oo dagaalkii labaad ee dunida. Inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida ka badan shaqaalaha military 100,000 u adeegi jireen garoonka diyaaradaha.
Garoonka ayaa lagu sameeyay qorshe horumarin dagaal ah oo ay ka mid ballaarinta meelaha terminal oo la dhigto, casriyaynta in runways ah, iyo abuurista Trade Center Air ah si kor loogu qaado horumarka dhaqaale ee Waqooyi Bari Indiana. Sidaas darteed of FWACAA uga go'an tahay adeegga macaamiisha, Maddaarka Caalamiga ah ee Fort Wayne loo aqoonsaday by USA Today sida mid ka mid ah garoomada diyaaradaha friendliest ee dalka.
Garoonka wuxuu wax ka qabtaa ku saabsan 35,000 caga /-offs qaado sannad kasta. Inta badan oo ka mid ah shirkadaha diyaaradaha Maraykanka ee waaweyn ama Feeders ay u adeegaan garoonka diyaaradaha iyo inta badan waxaa lagu quudinta xarumaha ay xiriir hore u sii wadeen. Allegiant adeegta suuqyada fasaxa iyo waddooyinka yar yar. Garoonka diyaaradaha waxay leedahay joogitaanka weyn oo sidayaal xamuul amuseen iyo UPS.
Labada FBOs weyn waxaa qaabeeyey in muuqaal ah. Fort Wayne Aero Xarunta cusub waa in xarunta halka Atlantic Aviation waa uun waqooyi-galbeed ee terminal ugu weyn.
Waxay ku taallaa ku dhagan Garoonka Caalamiga ah ee Fort Wayne waa Fighter 122nd ku Wing ee Air Guard Qaranka Indiana. 122nd The umado ee A-10 qaylo II ka mid ah saldhig ee Fort Wayne, Indiana. Waxaad iyaga ku arki kartaa in muuqaal ah.
Author: Shehryar 'Shez' Ansari
KLAX - Sawir Qaade Khadka Duulimaadka ee Magaalada Los Angeles FSX & P3D 3.0
Sawirka dhabta ah ee sawirka JFK FSX & P3D
Madaarka Fort Wayne Intl Airport FSX / Steam 1.0
Madaarka Fort Wayne Intl Airport P3D 1.1